Microsoft Edge paLinux? Zvinoita kunge padhuze nakare kose Linux Vakapindwa muropa
pablinux | | Zvirongwa, Linux software
[irony] Zvichadaro nekuti muLinux hamuna kukwana mabhurawuza [/ irony] Mazhinji maLinux anogovera anoshandisa Firefox seye default webhu bhurawuza, nepo vamwe vazhinji vachitumira neCromium. Mukuwedzera, uye takataura saizvozvo, isu zvakare tine Chrome, Opera, Vivaldi, Falkon ... huya, ivo havasi vashoma. Asi pane imwe nguva isu tinogona kuve neimwezve, kubvira Microsoft Edge iri kuuya kuLinux "pakupedzisira." Kana saka Microsoft yataura vhiki ino, kunyanya Kyle Pflug kuburikidza ne Twitter.
Iyo poindi ndeyekuti Microsoft Edge ichave iri Chromium-yakavakirwa, yakavhurwa sosi vhezheni yeChannel, uye nenguva yatakazoziva, vazhinji vedu takashamisika, zvakanyanya nekuda kwekuda kuziva pane chero chimwe chikonzero, kana vaizoburitsa vhezheni yeLinux. Kunyangwe ichive chisati chiri chepamutemo, mhinduro kuburikidza neTwitter kumubvunzo uyu inoita kuti tifunge kudaro, kunyangwe isu tichazofanira kumirira kwenguva yakati rebei.
1 Kyle Pflug: Microsoft Edge iri kuuya kuLinux "pakupedzisira"
2 Izvo hazvinei nechokuita neGoogle
Kyle Pflug: Microsoft Edge iri kuuya kuLinux "pakupedzisira"
Kwete izvozvi - chimwe chinhu chatinoda kuita pakupedzisira (yedu yekuvaka sisitimu inomhanya paLinux) asi tiri kutora zvinhu nhanho imwe panguva kutanga kubva paWin10, uye hatigone kuzvipira kuLinux izvozvi.
- Kyle Pflug (@kylealden) April 8, 2019
"Kwete izvozvi - chimwe chinhu chatinoda kuita pakupedzisira (system yedu inomhanya paLinux) asi tiri kutora zvinhu nhanho nhanho kutanga naWin10, uye hatigone kuzvipira kuLinux izvozvi."
Kana tikaverenga pakati pemitsetse, kubva paPflug's tweet tinogona kutora mhedziso mbiri: yekutanga ndeyekuti hapana nguva yaanoti "kwete." Chechipiri ndechekuti zvinoita sekunge chimwe chinhu chavanoda kuita uye vakapaka, chimwe chinhu chatinoona mu "Not Yet" uye kuti havagone kutarisa kuLinux "izvozvi".
Izvo hazvinei nechokuita neGoogle
Chinhu chakanyanya kukosha kune vamwe vashandisi ndechekuti Microsoft Edge ichave yakavakirwa paChromium, kwete muChannel. Chromium ndiyo yakavhurwa sosi vhezheni yeChannel, asi chinhu bedzi chayinacho kubva kuGoogle ndiyo kodhi yekodhi. Microsoft yaizoita yayo bhurawuza inoenderana neChromium, yakafanana nemamwe akawanda mabhurawuza ewebhu akapararira akatenderedza network. Muchokwadi, ingangoita yega inozivikanwa browser isingabve paChromium ndeyeFirefox, uchishandisa kodhi kubva kuGoogle, yayo Chrome, Opera uye Vivaldi, pakati pevamwe.
Chinangwa chaMicrosoft, vanodaro, ndechekudzivirira kukamukana kwakawanda painternet, kuti kune kuwirirana kukuru. Izvi zvinoenderana, semuenzaniso, kuti mabhurawuza mazhinji anoshandisa iwo ekuwedzera, kunyangwe chiri chokwadi kuti vamwe vacharamba vachishanda chete muChannel.
Microsoft Edge ine dzimwe sarudzo dzakanaka, Asi ndizvo dzimwe sarudzo izvo ini pachangu handidi kana kuti ini ndajaira kushandisa nedzimwe nzira. Ungade here Microsoft Edge kuti pakupedzisira ugare paLinux?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux software » Microsoft Edge paLinux? Inotaridzika padhuze kupfuura nakare kose
Linux 5.2 inogona kunge iri dhiri rakaipa kune mamwe makomputa